ဖုန်းနံပါတ် Cleaner App ကိုအခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » ဖုန်းနံပါတ် Cleaner - Antivirus ကို, Junk Cleaner & Booster
ဖုန်းနံပါတ် Cleaner - Antivirus ကို, Junk Cleaner & Booster APK ကို
ဖုန်းနံပါတ် Cleaner - antivirus ကိုသန့်စင်, junk သန့်စင်, app ကို cache ကိုသန့်စင်, ဖုန်းမြန်နှုန်း booster ကတော့ CPU ကိုအေး, ဘက်ထရီချွေတာ, အင်တာနက် booster ကတော့ဂိမ်း booster ကတော့ antivirus ကိုအခမဲ့, မှတ်ဉာဏ်အာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်း, အကြောင်းကြားစာသန့်စင်နှင့်အတူအစွမ်းထက် Android ဖုန်းသန့်စင် app ကို။ သင့်ရဲ့ android ဖုန်းကိုကာကွယ်ပါနှင့်သန့်ရှင်းရေး! - ငါ၏အ android ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
- ငါ၏အ android ဖုန်းကိုချအအေးဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့် Trojan တွေကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်, နေပူသောအခါကနှေးလာသောအခါသင်၏ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, သို့မဟုတ်ဆူညံဆိုင်ရာအသိပေးချက်များအသံပိတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချအအေး, သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေး, ဒီ antivirus ကိုအခမဲ့ဖုန်းကိုသန့်စင်ကို install လုပ်ဖို့ချီတုံချတုံမရ ဒါဟာအလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသော Toolbox ၌တည်ရှိ၏။
ဖုန်းနံပါတ် Cleaner = Junk Cleaner + ဗိုင်းရပ်စ် Cleaner + Antivirus ကို Cleaner + App ကို Cache Cleaner + မြန်နှုန်း Booster + CPU ကိုအေး + ဘက်ထရီ Saver + အင်တာနက်ကို Booster + ဂိမ်းအာနိသင်တိုးမြှင့် + Antivirus ကိုအခမဲ့ + မှတ်ဉာဏ် Booster + သတိပေးချက် Cleaner + စာမေးပွဲများ Security + တစ်ခုမှာပုတ် Boost
▶ junk Cleaner: အစွမ်းထက် junk သန့်စင်။
▶ virus Cleaner: ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့် Trojan ဟာ detect သင်၏ android ဖုန်းမှသူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
▶ App ကို Cache Cleaner: လုံလုံခြုံခြုံအသုံးမကျ application ကို cache ကိုဒေတာ clean ။
▶ မြန်နှုန်း Booster: 60% ဖြင့်သင့် android ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ဖုန်းကိုအာနိသင်တိုးမြှင့်။
▶ CPU ကို Cooler: ဖုန်းကို CPU ကိုအပူချိန်ကိုချအအေး။
▶ ဘက်ထရီ Saver: ပါဝါကိုချွေမှဘက်ထရီဖျန် apps များကိုသတ်။
▶ အင်တာနက်ကို Booster: အစာရှောင်အင်တာနက်မြန်နှုန်းအဘို့ကို Wi-Fi ကိုမြှင့်တင်ရန်။
▶ ဂိမ်း Booster: ကစားဂိမ်းမတိုင်မီ memory space ကိုလွှတ်ပေးရန်ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်။
▶ အခမဲ့ antivirus: antivirus ကိုအတွင်းအပြင်အခမဲ့, အစွမ်းထက် antivirus ကိုအင်ဂျင်ကို။
▶ မှတ်ဉာဏ် Booster: RAM ကိုသန့်စင်မှတ်ဉာဏ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဖုန်းမြှင့်တင်ရန်။
▶ သတိပေးချက် Cleaner: စကားအများနှင့်လိုအပ်သောလျှင်မလိုချင်တဲ့အကြောင်းကြားစာများကိုဆေးကြောသန့်စင်။
▶ 1 ကိုထိပုတ်ပါထပ်တိုး: တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါသဖြင့်ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်။
✔ junk Cleaner - သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်
အစွမ်းထက် junk သန့်စင်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပိုသိုလှောင်မှုကိုအာကာသလွှတ် cache ကိုဖိုင်များ, ကျန်နေတဲ့ Junk ဖိုင်များကို, သမိုင်း junk နှင့်ပေါရာဏ APK ကိုဖိုင်တွေရှင်းလင်းဖို့ကူညီပေးသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။ လုံးဝငါ့အကို Android clean!
✔ virus Cleaner - အခမဲ့ antivirus
အကောင်းဆုံးကိုအခမဲ့ antivirus ကို, ဆန့်ကျင် malware များ, အတွင်းအပြင်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအင်ဂျင်နှင့်အတူ, သငျသညျ App ကိုစကင်နှင့်ဖိုင်ကိုစကင်ခြင်းဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့် Trojan ဟာ detect နိုင်ပြီး, ထို့နောက်သင့် android ဖုန်းမှဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့် Trojan တွေဖယ်ရှားပစ်ရန်ဗိုင်းရပ် remover အဖြစ်ပြုမူ; သူတို့သည်သင်၏ဖုန်းကိုသို့ရောက်သည့်အခါများနှင့်လည်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့် Trojan တွေပိတ်ဆို့။ လုံခြုံရေးစစ်ဦးချင်းစီ app ကိုတပ်ဆင်ဘို့ပြုပါလိမ့်မည်။
✔ App ကို Cache Cleaner
ဖုန်းနံပါတ် Cleaner ဟာ android ဖုန်း app များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကူညီပေးသည်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးမကျ application ကို cache ကိုဖိုင်တွေရှင်းလင်း။ ဒီအစာရှောင်ခြင်းအစွမ်းထက် cache ကိုသန့်စင်ထက်ပိုအာကာသလွှတ်ကူညီပေးသည်။
✔ မြန်နှုန်း Booster - ဖုန်းအရှိန်မြှင့်
ဖုန်းကိုအရှိန် Booster, သင့်ဂိမ်းများနှင့် app များကိုတိုးမြှင်မှတ်ဥာဏ် (RAM) ကိုတက်လွှတ်ပေးခြင်း။ ဂိမ်းနှင့် apps laggy မရှိဘဲပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေစေပါ။ အကောင်းဆုံးမြန်နှုန်း Booster နှင့်ဂိမ်း Booster!
✔ CPU ကို Cooler
CPU ကို Cooler သင်၏ဖုန်း၏အပူချိန်ကိုပြသထားတယ်နှင့်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ Android ဖုန်း CPU ကိုအပူချိန်ကိုချအအေးပေးနိုင်သည်။
✔ ဘက်ထရီ Saver - Power Saver
ထွက်ရှာ 1 ကိုထိပုတ်ပါသဖြင့်အာဏာကိုကယ်ဖို့ apps များဖျန်ဘက်ထရီကိုသတ်မှအသုံးပြုခြင်းဘက်ထရီချွေတာ; ငါ၏အ android ဖုန်းကိုပါဝါအနိမ့်သို့မဟုတ်အစာရှောင်ခြင်းဖျန်ဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, ဘက်ထရီချွေတာဘက်ထရီဖျန် apps များသန့်ရှင်းရေးအားဖြင့်ဘက်ထရီကိုကယ်ဖို့သငျသညျကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
✔ အင်တာနက်ကို Booster
ထွက်ရှာနှင့်အင်တာနက်သုံးပြီး apps များကိုသတ်ပစ်ရန်အင်တာနက်ကို Booster ကိုသုံးပါ။ ပိုများသောဒေတာအသွားအလာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်!
✔ မှတ်ဉာဏ် Booster - RAM ကို Cleaner
မှတ်ဉာဏ် Booster RAM ကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဘက်ထရီကယ်ဖို့ Apps ကပ running နောက်ခံပိတ်ဖို့ရန်ကူညီပေးသည်။ 60% သောငါ၏ဟာ android ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်!
✔ သတိပေးချက် Cleaner
သတိပေးချက် Cleaner အဆိုပါမလိုချင်တဲ့အကြောင်းကြားစာများအသံပိတ်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကူညီနှင့်သင့်ဖုန်းကိုစင်ကြယ်အစာရှောင်ခြင်း, ဘေးလွတ်သောစေသည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းပိတ်ဆို့ခံရဖို့မမြားကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။
✔ 1 ကိုထိပုတ်ပါထပ်တိုး
အဆင်ပြေတဲ့အာနိသင်တိုးမြှင့်ဖြတ်လမ်းတဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါသဖြင့်ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန် Desktop ပေါ်မှာနေရာချစဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ လူသိများပြဿနာများကိုဖြေရှင်း
2 ။ အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များကိုပိုကောင်းအောင်
3 ။ တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
ဖုန်းနံပါတ် Cleaner - Antivirus ကို, Junk Cleaner & Booster
9.57 ကို MB
စင်ကြယ်သော Boost + စတူဒီယို